IJordani iphelisa ukubekelwa bodwa kubakhenkethi bamanye amazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IJordani Breaking News » IJordani iphelisa ukubekelwa bodwa kubakhenkethi bamanye amazwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • IJordani Breaking News • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
IJordani inciphisa iimfuno zokungena kubakhenkethi bamanye amazwe
Abasemagunyeni kurhulumente waseJordani babhengeze ukuba abakhenkethi bamanye amazwe akusafuneki ukuba bangene bodwa xa befika eJordani.
Umgaqo omtsha watyikitywa kwaye waqalisa ukusebenza nge-13 kaJanuwari.
Xa ungena kweli lizwe, iindwendwe zasemzini kufuneka zivelise iziphumo zovavanyo lwe-PCR Covid-19, ayenziwanga emva kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba.
Kwisikhululo seenqwelomoya, abakhweli kufuneka baphinde bavavanywe (iindleko zenkonzo iyi- $ 40) Ukuba uvavanyo luchanekile, kuya kufuneka ukuba abakhenkethi bazimele bodwa, emva koko baphinde baluthathe uvavanyo.
Ukongeza, abahambi bakhululwe kubhaliso olunyanzelekileyo kwiwebhusayithi ye-VisitJordan.
Kwakhona, abasemagunyeni baye banciphisa izithintelo ezithile kwilizwe. Ke, ixesha lokufika ekhaya belirhoxisiwe ngolwesiHlanu, kodwa ubusuku busasebenza.